सेरोफेरो : ‘ट्याक्सी मिटरमा जान्छ ?’
सामान्यतया छ घण्टा लाग्छ । गत बिहिबार १२ घण्टाको बस यात्रामा बल्ल तल्ल काठमाडौं आइपुगियो पोखराबाट । एसी सुविधा सहितको टुरिष्ट बस गोल्डेन ट्राभल्सले एसिको चिसो त पुरा यात्रामा जम्मा आधा घण्टा मात्र चखायो त्यो पनि सबैले झपार्न थालेपछि मात्र । वाइफाइ त कहाँ पाउँनु । यसै पनि धेरै बसमा वाइफाइ लेखिएको पढ्न पाइन्छ चलाउँन पाइँदैन । एकै सिट भिन्न यात्रुहरूको नाममा बुकिङ गर्देकाले अर्को तनाव भयो । आधा घण्टा भन्दा बढी दोबाटो मै बस रोकियो । केही विदेशी पर्यटकले आफू बसिरहेको सिट गुमाए र अन्त सर्नु प¥यो । यस्तो बेला हरियो प्लेट लगाउँने बसलाई नै लाज नलागेपछि के गर्नु ?
अझ बसको ढोका बिग्रेको रैछ पुरै दाम्लो लगाएर बाँध्न र खोल्न पर्ने । बस हिडिरहँदा पनि धेरै पटक डोरी फुस्केर ढोका अटोमेटिक खुल्थ्यो । यात्रा भरी ढोका झर्ला कि झै गरी बजेको कर्कश संगीतले पनि पार्नु पा¥यो । सानी छोरीको हैरानी हेर्दै, दोब्बर समय लगाएर, कलंकी झरेको छैन ट्याक्सीवालाको मनोमानी सुरु भयो ।
सामान्यतया ३ सय रुपैयाँमा कलंकीबाट नयाँ बानेश्वर आइपुगिन्छ मिटरमै । एक त मिटर लगाउँने कुरो गर्दा कानै नसुने झै गर्छन् । अर्को कोट्याइ कोट्याइ सोध्दा ५ सय घट कसैले भन्या हैनन । सोच्छु, यो शहरमा ट्याक्सी चढ्दा जाने ठाउँका बारेमा मात्र कुरा हुनै पैसाको बारेमा कुरै गर्न नपर्ने कहिले होला ? पैसा त खास ट्याक्सीको मिटरले बोल्न पर्ने हो तर यहाँ त्यो भन्दा पहिला चालकको मुखको मिटर चल्न सुरु गर्छ । अझ मिटर जाउँ भन्ने बित्तिकै केहीले भने मीठो कथा बुन्दा रैछन्, ‘जान्थेँ हेर्नु न अर्को मान्छे कुरिराछु ।’
लामो यात्राले प्रेसर परेको टाउकोमाथि ट्याक्सीवालाको मनोमानीले गर्दा कुकरको झै सिठ्ठी बज्न सुरु ग¥यो । सहनुको पनि हद हुन्छ । कलंकी मकालु पेट्रोल पम्प अघिको धुलाम्य सडकमा झोलाको चांङ अनि श्रीमती र छोरीलाई छाडेर म सरासर कलंकी चोकजाँदै गर्दा ट्राफिकलाई भेटेँ । ‘दिक्क बनाएँ, कोही मिटरमै जान मान्दैनन, पैसा पनि कम भन्दैनन,’ मेरो कुराले भन्दा पहिला ट्राफिक प्रहरीलाई जामले तनाव दिइसकेको रैछ । उनी पनि जंगिँदै भनेँ, ‘त्यसको आज दिन बिग्रेछ कुन हो देखाउँनुस् त ।’
यति धेरैसँग रिक्वेस्ट गरेको थिएँ । कोही चिनिएनन । कोही तितरबितर भैसकेको थिए । अन्तिमको एक ट्याक्सी वालासँग भने अल्लि विवादै भाथ्यो ।
हुन त यसरी सोझै रकम भन्न नहुने हो । तर हाम्रो सिस्टम यस्तो बसेको छ कि ‘मिटर’ भनेर अड्डी लिइरहन सकिन्न भन्ने तितो सत्य मैले स्विकार्नु पथ्र्यो । यहाँ त मैले ३ सय भनेपछि ती चालक बोल्न छाडे । मुन्टो अर्को तर्फ फर्काएर बसे । मैले जाने हैन भनेर सोधेँ । उनी केही बोलेनन् । टाउको मात्र हल्लाए । उनको यो पाराले दिनभरीको भडाँस मेरो मुखमा आइसकेको थियो ।
मैले अल्लि नजिक गएर चर्को स्वरमा भनेँ, ‘क्या हो ? बोल्न पनि आउँदैन ? कति लिनुहुन्छ ?’
‘पाँच सय घटी हुँदैन’
यि पनि अघिका ट्याक्सीवालाकै कित्तामा गए । न ढुंगा हाल्नु न ट्याक्सी धकेल्नु । के गरुँ र कसो गरुँ भन्दै भुटभुटीँदा हामी जस्ता यात्रु यतिखेर आफू आफैलाई निरिह महसुस गर्दा रहेछौं । त्यसमाथि लामो यात्राबाट काठमाडौं झरेकालाई त झन्, रिसको पारोले थर्मोमिटर फुटाल्छ ।
‘५ सय घटी जान्न, मिटरमा त मिल्दैन’ भन्दै उनले हाक्कै मुख फोरेका थिए । मैले ट्राफिकलाई सोझै उसैतर्फ देखाइदिएँ । प्रहरी सो ट्याक्सीसम्म पुग्नु अघि नै उनले अर्कैसँग बार्गेनिङ गर्न भ्याइसकेका रैछन । कुलेश्वर जान खोजेका एक दाई रिसाउँदै थिए, ‘हद हुन्छ नी यार के भन्या त्यस्तो ?’
‘को सँग मानिन ?’ उनी हल्का रुपमा प्रस्तुत भए । प्रहरीको अघि सरासर गएर म उभिएँ ।
‘वाँले बोरा छ भनेर लैजान मिल्दैन भनेको, मिटरमा जान्छु त भनेकै छु,’ हत्तनपत्त चालकको बोली फेरियो ।
आखिरमा झुठ बोलेका उनी नै निहुरिए । ट्राफिकले भनेपछि मैले ट्याक्सीको ढोका खोलेर सामान फटाफट हालेँ र हामी छोरी सहित ट्याक्सी चढ्यौं । ति ड्राइभरले मिटर अन गरे । ‘बाटोमा केही लफडा झिके भने तुरुन्त १०३ मा कल गर्नुहोला,’ ट्राफिकको कुराले धेरै ढाडस दियो । मिटरमै भनेकै रकम बासस्थानसम्म आइयो । सोझै ट्राफिक प्रहरी वा १०३ मा कम्प्लेन गरेको यो पहिलो पटक भने थिएन ।
प्राय अरु बेलाको ट्याक्सी यात्रा भन्दा बिलकुलै फरक ट्याक्सी चालकसँग रमाइलो गफगाफ नगरी ‘तै चुप मै चुप’ को अवस्थामा सरासर डेरामा आइयो । झर्ने बेलामा ट्याक्सीको फोटो पनि खिच्न भ्याएँ । खासमा मलाई १२ घण्टाको पोखरा—काठमाडौं यात्रा भन्दा कलंकीका लफडाले धेरै थकायो । सम्झदा पनि मन खिन्न भएर आउँछ, हामीले कस्तो शहर बनायौं, मिटरवाला ट्याक्सीमा मिटर चलाएर यात्रा गर्न पाउँदा युद्ध जितेको अनुभव हुने ।
* आफै त महादेव उत्तानो पर, कसले सुल्टो बनाइदियोस् * पशुपति क्षेत्रबिकास कोषमा पैसो छ, खल्तिमेरो रित्तै * गाँजा खाएको मान्छे, पाती देख्...
हाम्रो देखासिकीमै। दुई वर्ष पुग्दा नपुग्दै छोरीले कलम समाउन थालिन्। उनको रूची देखेर, मैले उनलाई बाह्र रंगका कलमहरू ल्याइदिएँ। ती सबै कलम ए...
Blog Archive September 2018 (1) August 2018 (1) June 2018 (3) May 2018 (1) February 2018 (4) December 2017 (4) October 2017 (1) September 2017 (3) June 2017 (1) April 2017 (1) December 2016 (1) November 2016 (2) October 2016 (2) August 2016 (1) July 2016 (1) June 2016 (1) May 2016 (3) April 2016 (1) March 2016 (3) February 2016 (1) December 2015 (6) November 2015 (5) October 2015 (1) September 2015 (4) August 2015 (1) July 2015 (1) June 2015 (2) April 2015 (1) March 2015 (2) February 2015 (1) August 2014 (2) June 2014 (3) February 2014 (1) January 2014 (2) December 2013 (1) November 2013 (1) October 2013 (2) September 2013 (4) August 2013 (1) July 2013 (6) May 2013 (4) April 2013 (2) March 2013 (7) January 2013 (2) August 2012 (1) May 2012 (3) December 2011 (3) November 2011 (2) September 2011 (1) July 2011 (6) June 2011 (2) May 2011 (4) April 2011 (2) March 2011 (7) February 2011 (9) January 2011 (13) December 2010 (2) August 2010 (1) December 2009 (1) November 2009 (1) October 2009 (1) September 2009 (6) August 2009 (1) July 2009 (6) April 2009 (5) March 2009 (35)